Mmanya na-arinụ - ndu kachasị
Olee otú m ga-esi kwụsị ị myụ mmanya m? Ya mere, olee otú m ga-esi kwụsị ị drinkingụ mmanya mgbe m lọtara? E nwere usoro ole na ole anyị na-agwa ndị otu anyị ka ha na-agba mbọ ịkwụsị omume a. Na-a theụ mmanya. chọta ihe ọzọ. Atụla egwu ịjụ maka nkwado. Na-emere onwe gi ebere.6. 2018.
ala na-akwụsị john o groats okirikiri
Ala na-agwụ john o groats okirikiri - ngwọta na-adịgide adịgide
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe site na Lands End ruo John O Groats? 10 ruo 14 ụbọchị
Gbachi okirikiri - chọọ ihe ngwọta
Kedu ụdị égbè eluigwe 4? Enwere ụdị égbè eluigwe anọ: otu-cell, multi-cell ụyọkọ, ọtụtụ mkpụrụ ndụ cell na supercells.
peloton okirikiri ceo
Kedu ka m ga - esi kpọtụrụ onye isi nke Peloton? Azịza 1: Nọmba ekwentị maka Peloton Cycle bụ (646) 277-4497. Ajụjụ 2: Whonye bụ onye isi oche nke Peloton Cycle? Azịza 2: Onye isi nke Peloton Cycle bụ John Foley.
Okpu agha okpu agha - ihe eji eme ihe
Ọ bụ iwu iyi okpu okpu UK? Enweghị iwu Britain ịmanye ndị na-agba ịnyịnya, nke afọ ọ bụla, iyi okpu mgbe ha na-agba ịnyịnya, n'agbanyeghị na Highway Code na-atụ aro na ndị na-agba ịnyịnya ígwè kwesịrị iyi okpu okirikiri nke kwekọrọ na iwu ndị dị ugbu a, bụ nha ziri ezi ma debe ya kpamkpam.
Okporo ụzọ 66
Routezọ 66 - ihe ngwọta bara uru
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe Cycle Route 66? odika 32 ụbọchị
hyde park okirikiri
Ogige ntụrụndụ Hyde - otu esi emezu
Nwere ike ịgba okirikiri na Hyde Park? Hyde Park Onye kacha nwee mmekọrịta enyi na enyi nke ogige ntụrụndụ London niile, Hyde Park nwere ebe ole na ole a nabatara ịgba ịnyịnya. A na-ahapụ ịnya ịnyịnya ígwè na Broad Walk, Palace Walk and Mount Walk. A na-ahapụ ịgba ịnyịnya Green Park naanị na Hill Hill, nke bụ ụzọ na-aga n'akụkụ ogige ahụ.
netwọk okirikiri mba
Netwọk okirikiri mba - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Nwere ike ịga ije n'okporo ụzọ usoro mba? Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa na ịga ije na ịgba ịnyịnya ígwè na National Cycle Network ga-adị ugbu a na map Ordnance Survey. N’afọ 2017, enwere njem ije nde 410 na njem njem igwe njem nde 377 na Network.19. 2019.
ụra okirikiri ngwa maka gam akporo
Cyclera okirikiri ngwa n'ihi na android - inogide ngwọta
Kedu ihe kacha mma ihi ụra maka gam akporo? 7 kacha mma ụra na-ehi ụraAwoken - Lucid Dreaming Tool. Ngwa maka gam akporo. Ihi ụra - Smart Elekere Mkpu. Ngwa maka iPhone na gam akporo. Izu Ike Melodies - leepda leepra. Ngwa maka iPhone na gam akporo. Ihi ụra Ura Ike Nap. Ngwa maka iPhone. Pzizz - Ihi ụra, Nap, Lekwasị anya. White Noise Lite. Relax & Sleep Well - Hypnosis na Ntụgharị uche. Ihi ụra.
Bath okirikiri - ahụkarị azịza na ajụjụ
Nwere ike ịgba okirikiri na Bath? Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ịgagharị na wiil abụọ, Bath bụ ọbụna ihe mara mma site igwe kwụ otu ebe. Ndị nne na nna nwere ike izuike dịka Bath nwere ọtụtụ ụzọ ụzọ okirikiri nke enweghị okporo ụzọ, na-enye gị na ezinụlọ gị ilekwasị anya na nlegharị anya akụkọ ihe mere eme na anụ ọhịa ị nwere ike izute.
Arnold okirikiri - depụtara ajụjụ na azịza
Kedu ụdị ụdị steroid ndị Arnold were? Ha na-ekwu Schwarzenegger gwara ha na ọ malitere ị Dụ Dianabol, bụ onye na-ewu ewu na-ewu ewu, mgbe ọ dị afọ 17 na Germany ma na-agbanyekarị ihe ndị ọzọ dị ka testosterone mgbe ha rutere America na 1968.
sean kelly okirikiri
Sean kelly okirikiri - the ultimate guide
Afọ ole ka Sean Kelly na-agba ịnyịnya ígwè? /
usoro kachasị mma maka ihe karịrị 40
Kachasị mma maka ihe karịrị 40 - otu esi edozi
Cycgba ígwè ọ dị mma karịa 40? Y’oburu na ichoro ihe omumu nke gha enyere gi aka ime ka oku ghara idi ike ma belata nsogbu nke oria ojoo a, cycgba kẹkẹ nwere ike iburu gi. Egwuregwu ahụ nwere ike inye aka mee ka ahụike obi dị mma, dịka ọ na-eme ka obi gị dị elu, mana ọ dị mfe na ikpere gị karịa ịgba ọsọ.
suga riri ahụ
Sugar riri ahụ okirikiri - azịza dị mfe maka ajụjụ
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji kwụsị ị addictionụ ọgwụ ọjọọ? Ọtụtụ n’ime anyị ga-a overụbiga mmanya ókè mgbe ụfọdụ. Mana ka anyị na-a sugarụkwu shuga, ihe anyị chọrọ, ka Mark Hyman, MD na-ekwu. Agbanyeghị, ozi ọma bụ na ndị mmadụ nwere ike ịkwụsị ị addictionụ shuga na ụbọchị 10.
gbaa ụwa gburugburu
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji gbaa ígwè gburugburu ụwa? Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji gbaa ịnyịnya ígwè gburugburu ụwa? Njegharị obere njem gburugburu ụwa ga-ewe gị 1.5 ruo afọ 2. Mana ọ nwere ike ịdabere n'ọtụtụ mgbanwe. Ogologo ọsọ ị nwere ike ịtụ anya njem njem igwe kwụ otu ebe zuru oke dị n'etiti 10 ruo 20 km / h (nkezi 15 km / h ma ọ bụ 9.3 kilomita kwa elekere). 14 2019.
lyme na mgbanyụ ọkụ
Ogologo oge ole ka Lyme nwụrụ? A na-akpọkarị usoro nhicha ma ọ bụ nhichapụ a dịka ndị na-arịa ọrịa Lyme. Mmalite nke ahịhịa Lyme bụ ihe dị ka awa 48-72 mgbe ọ malitere ọgwụ nje wee nwee ike izu ole na ole, n'adịghị ka syphilis, nke na-amalite n'ime elekere ma ọ na-abụkarị n'ime ụbọchị. 31. 2017.
enye onyinye okirikiri
Ndụ onye inye onyinye - ihe ngwọta dị irè
Kedu usoro ndụ onye nyere onyinye? Ndụ nke onye nyere onyinye na-akọwa ụzọ ndị otu na-anaghị akwụ ụgwọ na-esonye ma na-ele ndị nyere ha anya site na mbido mmekọrịta ha (mgbe mbụ ha mụtara banyere nzukọ gị) ruo mgbe ha nyere na gafere. Usoro atọ nke Donor Lifecycle bụ Nnweta, Njide, na nkwalite.
ọhụrụ okirikiri gia
Ngwongwo ohuru ohuru - otu esi edozi
Nwere ike itinye mgbatị ọhụrụ na igwe kwụ otu ebe? Azịza ya bụ 'ee.' Enwere ụzọ dị iche iche iji wụnye ngwa ngwa gị na igwe kwụ otu ebe, mana ọ bụghị mgbe niile gbasara ịgbanwee naanị gia. Dabere n'ụdị ihe ndị i nwere, na ndakọrịta nke ihe ndị ahụ, ọ ga-adị mkpa ka ị dochie ụfọdụ n'ime ihe ndị ọzọ. 2012.
ezigbo oge okirikiri
Oge okirikiri - nzaghachi nye nsogbu
Kedu oge dị mma maka ịgba ígwè? Ma ị na-agba ịnyịnya ma ọ bụ na ị na-agba ịnyịnya, ịgba ịnyịnya ígwè na-atọ ụtọ ma nwee ike ịmalite oge ọ bụla nke ụbọchị ma ọ bụ ụtụtụ, n'ehihie (ọ bụrụ na ịnwere ike ịnya ịnyịnya n'okpuru anwụ na-ekpo ọkụ!), Anyasị (mgbe ọrụ gachara) na etiti abalị (ntụgharị abalị).
ego ego peloton
Inye ego Peloton - olee otu esi edozi
Peloton enwere uru? Maka oge dị ugbu a, Peloton buru amụma ego nke $ 1.1. 31, ego ha ritere na 128% site na afọ gara aga ruo $ 1.06 ijeri, oge izizi ahịa nke ọnwa atọ etinyego ijeri $ 1. Ndị nyocha na-achọ $ ijeri $ 1.03. Onu ogugu ruru $ 63.6 nde, ma obu 18 cents uzo, site na $ 55.4 nde efu otu afo gara aga.